Adeega Internet-ka oo Muqdisho dib ugu soo laabtay caawa | XORRIYA NEWS
Home Wararka Adeega Internet-ka oo Muqdisho dib ugu soo laabtay caawa
Adeega Internet-ka oo Muqdisho dib ugu soo laabtay caawa
In ka badan 3 maalin oo xiriir uu Koonfurta iyo bartamaha dalka ka maqnaa adeega Internet Fiber Optic ayaa caawq la sheegayaa in dib loo helay adeegaas, waxaana si caadi ah u shaqeynaya waireless-ka iyo daatada.
Adeega Internet-ka ayaa caawa dib ugu soo laabtay caasimada Dalka. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo kamid ah shirkadaha adeegyada internet-ka bixiya kuwooda ugu weyn.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Shirkadda Hormuud waxay macaamiisheeda sharafta leh ka raali gelineysaa hakadkii ku yimid adeega internet-ka shirkada muddadii dhowrka beri ahayd, sidaa darteed waxaan caawa idinku bishaareeneynaa in qadka internet k uu si buuxda u soo laabtay.”
Si kastaba hadalkaan ayaa kusoo aadaya xilli adeega internet-ka uu in ka badan 3 maalin ka maqnaa caasimada iyo qaar kamid ah deegaanada Dalka.